ကျောင်းသားများအတွက် Google သုံးနည်း လမ်းညွှန်
13-Jun-2017 tagged as နည်းပညာ
ယခင်အပတ်က ကျောင်းသားတိုင်းအတွက် Google အသုံးပြုနည်း လမ်းညွှန်ကို ဖော်ပြပေးခဲ့ပြီး Google Web Search (Tips and Tricks), Advanced Google Web Search၊ ရှာဖွေမှုရလဒ်များ၊ Advanced Searching၊ စာအုပ်များ ရှာဖွေခြင်း စသည့် အကြောင်းအရာများကို ဖော်ပြပေးခဲ့သည်။ ယခုတစ်ပတ်အတွက် ကျန်ရှိသည့် Google Scholar for Researcher, Facebook Group Search တို့ အကြောင်းကို ကျောင်းသားကျောင်းသူများအတွက် အထောက်အပံ့ဖြစ်စေရန် ရည်သန်ဆန္ဒပြု၍ ဆက်လက်ဖော်ပြပေးသွားပါမည်။
Google Scholar ဆိုသည်မှာ Google ၏ Search Engine တစ်ခုပင် ဖြစ်ပါသည်။ သို့သော် သုတေသန (Research) ပြုလုပ်သူများ၊ ကျောင်းသားများအတွက် အဓိကထားသည့် Website တစ်ခုပင် ဖြစ်သည်။ Research ဆိုသည့်အတိုင်း ထပ်ခါတလဲလဲ ရှာဖွေ၊ တီထွင်ဖန်တီးနိုင်ရန်အတွက် တစ်ကမ္ဘာလုံးမှ သိပ္ပံပညာရှင်များ၏ စာတမ်းများ၊ သုတေသန အောင်မြင်မှုများကို တစ်နေရာတည်းတွင် စုစည်းရှာဖွေနိုင်မည့် နေရာတစ်ခုပင် ဖြစ်သည်။
သုတေသန ပြုလုပ်ရာတွင် အောက်ပါအချက်အလက်များကို ကျောင်းသားတိုင်း ထည့်စဉ်းစားရန် လိုအပ်ပေသည်။
•Know Yourself (မိမိဘယ်နေရာတွင် တတ်ကျွမ်းသနည်း)
•Know Your Enemy (မိမိနှင့်အတူ အခြားနိုင်ငံက ပြိုင်ဘက်တွေက ဘယ်သူလဲ)
•Plan Your ‘Battle’ (မိမိသုတေသနအတွက် သေချာအစီအစဉ် ရေးဆွဲပါ)
•Go Into ‘Battle’ (မိမိသုတေသနကို စာတမ်းတင်ပြီး အားလုံးထက် ကောင်းမွန်ကြောင်း ပြသပါ)
•Win the ‘Battle’ (ကမ္ဘာ့စင်မြင့်ထက်တွင် မိမိအနိုင်ယူလိုက်ပါ) တို့ ဖြစ်သည်။ အထက်ပါ အချက်အလက်များသိရှိရန်အတွက် Google Scholar Search Engine က အထောက်အပံ့ကောင်းများ ပေးနိုင်မည် ဖြစ်သည်။ ဤနေရာတွင် Google Scholar မှ ဆောင်းပါးများကို မည်သို့ ရှာဖွေဖတ်ရှုရမည်ကို ဖော်ပြပေးသွားပါမည်။ (ရှာဖွေပုံ ရှာဖွေနည်းများကိုမူ ၆.၆.၂၀၁၇ ထုတ် The Voice နေ့စဉ်သတင်းစာနှင့် The Voice ၏ ဖေ့ဘွတ်ခ်နှင့် ဝက်ဘ်ဆိုက် စာမျက်နှာတွင် ‘ကျောင်းသားများအတွက် Google သုံးနည်း လမ်းညွှန်’ အမည်ဖြင့် ဖော်ပြပြီး ဖြစ်ပါသည်။)
ဥပမာအနေနှင့် ‘Wireless security survey’ ကို ရှာဖွေကြည့်ကြပါမည်။
ကျောင်းသားများ သုတေသန စတင်ပြုလုပ်ပြီ ဆိုလျှင် Literature Review ကို မဖြစ်မနေ ပြုလုပ်ရသည်။ Literature Review မှတစ်ဆင့် ဘယ်သူတွေက ဘာတွေလုပ်ထားသနည်း၊ ဘယ်လိုစဉ်းစားပြီး ပြုလုပ်ထားသနည်း ဆိုသည် သိနိုင်သည်။ အတိုချုပ်ပြောလျှင် မိမိပြုလုပ်မည့် သုတေသနပညာရပ်၏ Survey များကို ပထမဆုံး ရှာဖွေရမည်။ ပုံမှန်အားပြီး Survey Paper တိုင်းတွင် နောက်ဆုံးဖြစ်နေသော သုတေသနစာတမ်းများ၏ အောင်မြင်မှုများ အားနည်းချက်များကို တစ်စုတစ်စည်းတည်း ဖတ်ရှုနိုင်သည်။ ထိုမှတစ်ဆင့် တက်ပြီး မိမိသွားချင်သော လမ်းကြောင်းကို ဆက်လက်သွားရမည် ဖြစ်သည်။
Google Scholar Search Result များကို လေ့လာကြည့်သောအခါ အောက်ပါအချက်အလက်များသည် အရေးကြီးသည်။
ဘယ်ဘက် Column တွင် -
၁။ My Library (မိမိဖတ်လိုသော ဖတ်ပြီးသမျှ စာတမ်းများ သိမ်းထားရန်)
၂။ Any Time ကို တွေ့ရမည် ဖြစ်သည်။ မည်သည့်ခုနှစ်မှ ရေးသားသည်ကို ရှာဖွေချင်သနည်း။
၃။ Sort by relevance (သို့) Sort by date
၄။ Patents တင်ထားပြီးသားတွေပါ ရှာချင်တာလား။
၅။ Create Alert
Create Alert ဆိုသည်မှာ မိမိသိလိုသော သုတေသနနယ်ပယ်မှ စာတမ်းအသစ်တစ်ခု (သို့) တွေ့ရှိမှု အသစ်တစ်ခု ထွက်တိုင်း မိမိအား Email ပို့ အကြောင်းကြားပေးရန်အတွက် အသုံးပြုနိုင်သည့် အရာတစ်ခု ဖြစ်သည်။
Search Results တွင် အောက်ပါအချက်အလက်များသည် အရေးကြီးသည်။
၁။ [PDF] ဟု ပေါ်နေပါက တိုက်ရိုက်ဒေါင်းလုပ် လုပ်ပြီး ဖတ်ယူနိုင်သည်။
၂။ Cited By သည် အရေးကြီးသည်။ သုတေသနစာတမ်း ဘယ်နှစောင်က ဒီစာတမ်းကို မှီငြမ်းထားသနည်း။ Citation Number များလေ ထိုစာတမ်းကို ပြုစုထားသည့် သိပ္ပံပညာရှင်သည် နာမည်ကြီးလေ ဖြစ်သည်။ မိမိစာတမ်းကို မှီငြမ်းသူများလေ မိမိစာတမ်းသည် မည်မျှအရေးပါသည်ကို ခန့်မှန်းနိုင်သည်။
၃။ မိမိက ထိုစာတမ်းကို မှီငြမ်းလိုလျှင် Cite ကို နှိပ်ပြီး မိမိစာတမ်းတွင် ထည့်သွင်းနိုင်သည်။
၄။ Save ကိုနှိပ်လျှင် မိမိ၏ Google Scholar Library တွင် သိမ်းထားပေးသည်။
ညာဘက်ထောင့် အပေါ်တွင် ( ) ကို နှိပ်ပြီး
၂။ Advanced Search ကို စမ်းသပ်ကြည့်ပါ။
မိမိတက္ကသိုလ်က Library Search Engine ရှိခဲ့လျှင် Settings -> Library Links -> University ကို ရွေးချယ်ပြီး ရှာဖွေနိုင်ပါသည်။ Advanced Search တွင် Author (စာရေးသူ)၊ Publisher (ထုတ်ဝေသူ)၊ Date များကို သုံးပြီးလည်း ရှာဖွေနိုင်ပါသည်။
အထက်ပါ အချက်အလက်များကို အသုံးပြု ရှာဖွေပါက Master တန်း ကျောင်းသားများ၊ Ph.D တက်နေသော ကျောင်းသားများအတွက် မိမိရှာဖွေထားသော အချက်အလက်များကို မိမိ၏ Google My Library ထဲတွင် သိမ်းထားပြီး အချိန်မရွေး ပြန်လည်ရှာဖွေ ဖတ်ရှုနိုင်ပေလိမ့်မည်။
ယခုအခါ မြန်မာနိုင်ငံတစ်ဝန်းရှိ ကျောင်းသားကျောင်းသူများအတွက် Facebook သည် မရှိမဖြစ် ဖြစ်သည်။ Facebook တွင် နည်းပညာ ရှာဖွေကြသည်မှာ အထူးအဆန်း မဟုတ်ပါ။ အထူးသတိပေးချင်သည်မှာ Facebook တွင် Google ကဲ့သို့ ပြည့်ပြည့်စုံစုံ ရှာဖွေ၍ မရနိုင်ပေ။ Facebook ပေါ်တွင် အချိန်မကုန်စေရန် သတိပေးခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
Facebook ၏ အားနည်းချက်များမှာ
၁။ မိမိရေးသားထားသော အကြောင်းအရာများကို ပြန်လည်ရှာဖွေရ ခက်ခဲခြင်း
၂။ Like လုပ်သော Post က ထိပ်ဆုံးသို့ ရောက်လာခြင်း
၃။ နောက်ဆုံးပေါ် နည်းပညာများ မရှာဖွေနိုင်ခြင်း။ အခြေခံနည်းပညာများသာ အလွယ်တကူ ရှာဖွေနိုင်ခြင်းတို့ ဖြစ်သည်။
သို့သော် Facebook ၏ ကြိုးစားအားထုတ်မှုကြောင့် Facebook Group တွင် အောက်ပါအတိုင်း ရှာဖွေနိုင်သည်။
ဥပမာအနေနှင့် Myanmar Arduino Group ကို အသုံးပြုထားသည်။ (https://goo.gl/EHh2mf)
၁။ Myanmar Arduino Group မှ Post များကို Post လုပ်ထားသည့် Date အတိုင်း အစီအစဉ်တကျ ကြည့်လိုပါက Search Bar တွင် “*” ကို နှိပ်ပါ။
၂။ မိမိသိလိုသော အကြောင်းအရာနှင့် Date အတိုင်း အစီအစဉ်တကျ ရှာလိုလျှင် “*Bluetooth” စသဖြင့် ရှာဖွေပါ။
၃။ ကွန်ပျူတာ အသုံးပြုပြီး Facebook ကို ကြည့်ပါက ညာဘက်တွင် Files ရှိသည်။ Files ကို အသုံးပြုပြီး မိမိအဖွဲ့ဝင်များအကြား စာရွက်စာတမ်းများ ဖလှယ်နိုင်သည်။ အချိန်မရွေး ဝင်ရောက်ဖတ်ရှုနိုင်သည်။ ဖုန်းဖြင့် အသုံးပြုပါက Group -> Info -> Files ကို ရှာဖွေနိုင်သည်။
၄။ Events ကို အသုံးပြုပြီး အဖွဲ့ဝင်တွေအကြား Events များ ဖန်တီးနိုင်သည်။
Stackoverflow Search Tips for Programmers
Stackoverflow Search Tips for Programmers Stackoverflow webpage သည် Programming Language တစ်ခုခုကို ရေးသားသည့် ကျောင်းသား programmer များအတွက် အထူးအသုံးဝင်သော နေရာတစ်ခု ဖြစ်သည်။ Programming Code Error တက်တိုင်း Google Search တွင် ရှာဖွေသောအခါ အဖြေအများစုသည် Stackoverflow.com သို့ ရည်ညွှန်းသည်ကို တွေ့ရပေမည်။ Stackoverflow.com တွင်လည်း Google Search မှာ ရှာဖွေသကဲ့သို့ မိမိလိုချင်သော အချက်အလက်များကို ရှာဖွေနိုင်ပါသည်။
၁။ C# Tag လုပ်ထားသော၊ C# Language သုံးထားသော int to char မည်သို့ ပြောင်းလဲသည်ကို သိလိုလျှင် [tag] keyword ဖြင့် ရှာဖွေနိုင်ပါသည်။
ဥပမာ။ ။ [C#]
၂။ int to char Keyword အတိအကျနှင့် ရှာလိုလျှင် “” ထဲ ထည့်ပါ။
ဥပမာ။ ။ [C#] “int to char”
၃။ Special Character များ ထည့်ရှာချင်ရင်လည်း “” ထဲတွင် ထည့်ဖို့ လိုအပ်မည်။
ဥပမာ။ ။ “<%#”
၄။ မိမိရှာဖွေသော keyword ကို ခေါင်းစဉ် Title ထဲ ရှာလိုလျှင် title: ကို သုံးပါ။
ဥပမာ။ ။ title: char to int
၅။ Title က အရေးမကြီးဘဲ အဖြေစာသား Body ထဲမှာပဲ ရှာလိုလျှင် body: ကို သုံးပြီးရှာပါ။
ဥပမာ။ ။ body: char to int
၆။ မိမိရေးသားသော post များ ပြန်ရှာလိုလျှင် user:me keyword ကို သုံးပါ။
ဥပမာ။ ။ user:me char to int
၇။ မိမိမရှာလိုသော အရာရှိလျှင် - ကို သုံးသည်။
ဥပမာ။ ။ [C#] int to char -[C]. Tag C နှင့် တွဲနေသော အဖြေများ မလိုချင်ပါ။
၈။ အတိအကျ မသိလျှင် * ကို သုံးပါ။
Tips & Tricks အနေနှင့် အောက်ပါအချက်များကို သိမ်းထားသင့်ပေသည်။
exact "words here"
score score:3 (3+)
answers answers:3 (3+)
Self-Learning For You
အင်တာနက်ခေတ် ရောက်လာသည်နှင့်အညီ တစ်နေရာနှင့် တစ်နေရာသည် မဝေးတော့ပေ။ မိမိ ဖတ်ရှုလေ့လာလိုသည်များကို Google တွင် ရှာဖွေနိုင်သကဲ့သို့ မိမိအတွက် လိုအပ်သည့် အဆင့်မြင့် နည်းပညာများကိုလည်း Online ၌ သင်ကြားသည့် Website များမှ လေ့လာသင်ယူနိုင်သည်။ ယခုအခါ နည်းပညာတစ်ခု လေ့လာပါက ကျောင်းတွင်သာမက Online မှ သင်ပေးသော Website များမှလည်း ဘွဲ့လက်မှတ်များ ရယူနိုင်ပြီးဖြစ်သည်။ သို့သော် တက္ကသိုလ်တွင် အခြေခံ ပိုင်နိုင်အောင် သင်ကြားပြီး ကျောင်း၌ မသင်ကြားသော အကြောင်းအရာများကို Online မှ သင်ယူတတ်မြောက်ပါမှ အများထက် ထူးခြားအောင်မြင်မည်သာ ဖြစ်သည်။
Engineer များအတွက်မူ MIT - Massachusetts Institute of Technology မှ သင်သည့် MIT OpenCourseWare (https://ocw.mit.edu) သည် အထူးပင် ပြည့်စုံကောင်းမွန်လှသည်။ ကျောင်း၌လည်းသင် MIT Course လည်း ကြည့်ပါက ပိုမိုပြည့်စုံ နားလည်ပေလိမ့်မည်။
ဤဆောင်းပါးတွင် Online မှ လေ့လာသင်ယူခြင်းနှင့် ပတ်သက်ပြီး ကျောင်းသားများ တွေ့ကြုံခံစားရမည့် အခက်အခဲများမည့် အကြောင်းအရာများကို ဆွေးနွေးလိုသည်။
ဥပမာအနေနှင့် www.coursera.org. နှင့် www.easydevboards.com ကို ရည်ညွှန်းမည်ဖြစ်သည်။
၁။ Online Course လေ့လာရာတွင် Computer အသုံးပြုပြီး လေ့လာသင့်သည်။ ဖုန်းဖြင့် လေ့လာမည် ဆိုပါက အသုံးပြုရ ခက်ခဲစေသည်။
၂။ Login ပြုလုပ်တတ်ဖို့ လိုသည်။ Coursera တွင် Facebook Account အသုံးပြုပြီး ဝင်နိုင်သကဲ့သို့ Sign up အသစ်ပြုလုပ်ပြီးလည်း ဝင်နိုင်သည်။ easydevboards တွင် Facebook နှင့် Google Account ကို အသုံးပြုပြီး Login ပြုလုပ်နိုင်သည်။ မိမိအမည်နှင့် မဟုတ်သော အကောင့်အတုများ အသုံးမပြုသင့်ပေ။
၃။ Online Course တိုင်းတွင် လေ့လာရန် သက်သက်နှင့် တကယ်တတ်အောင်သင်ပြီး Certificate ယူရန်ဟူ၍ ၂ မျိုးရှိသည်။ Coursera တွင် Enroll လုပ်ရုံနှင့် ပိုက်ဆံပေးစရာ မလိုပေ။ သို့သော် တကယ်တတ်လိုပါက သူ၏ Quiz များ Assignment များကို လိုက်လုပ်ရမည်။ မလုပ်ပါက တကယ်မတတ်ပါ။ သင်တန်းကြေးသည်လည်း မများလှပေ။ easydevboards တွင် All Courses မှ တစ်ဆင့် သင်ကြားနေသော course များ တွေ့နိုင်ပြီး Free View ဟု ပြောပါက ဝင်ရောက်ဖတ်ရှုနိုင်သည်။
၄။ ကျောင်းသားအများစုသည် မိမိဖတ်လိုသော Website သို့ ဝင်ရောက်မွှေနှောက်သည့် အားနည်းသည်။ The Voice ဝက်ဘ်ဆိုက်တွင် အပိုင်းဘယ်နှပိုင်း ခွဲထားသနည်းဟု မေးလျှင် ဖြေတတ်ဖို့ လိုသည်။ IT အကြောင်း ဖတ်လိုက IT, နည်းပညာအကြောင်း ဖတ်လိုက Technology စသဖြင့် ထဲထဲဝင်ဝင်သိဖို့ လိုသလို coursera, easydevboards များတွင် မည်သည့်အချက်အလက်များ ရှိသည်ကို ဝင်ရောက်မွှေနှောက်ထားမှသာလျှင် မိမိအလိုရှိသလို အသုံးချနိုင်မည်သာ ဖြစ်သည်။
အထက်ပါ အကြောင်းအရာများကို လေ့လာမှတ်သားထားခြင်းဖြင့် မိမိတို့ လေ့လာလိုသော အချက်အလက်များ၊ အကြောင်းအရာများကို အချိန်ကုန်သက်သာပြီး လွယ်လင့်တကူ ရှာဖွေနိုင်မည်မှာ မလွဲဧကန်ပင် ဖြစ်ပါတော့သည်။
သီဟကျော် (Programme NYE)